Kupatsanura kweKibhodhi - YiXing International Logistics (GuangDong) CO., LTD
Keyboard LCL inotumirwa kuUnited States
Iyo yepasi rose yekugadziriswa chikuva che YiXing Global logistics kambani yakapihwa naMnu Lin weGogate Technology Co. Ltd. Zvinonzwisisika kuti Mme Lin anowanzo kuita bhizinesi rezvigadzirwa zvemagetsi, asi ino inguva yekutanga kuti ave nemukana wekushandira pamwe nemutengi weAmerica kuti atengese kunze, saka anofanirwa kutsvaga yeAmerican cross-border logistics platform iyo anga achiita bhizimusi rekutengesa kunze kwenguva yakareba.
IUnited States Ocean Line
Mme Lin vakadzidza nezve YiXing Global Logistics chikuva pane internet netsaona uye vakasangana naPeggy. YXL logistics chikuva inotora mukana uno kukuudza nezve zvigadzirwa zvemagetsi zvinotumirwa kuUnited States neGungwa. Mushure mekutaurirana naMai Lin, Peggy akaziva kuti Mai Lin vaida kutumira bhatani rekhibhodi kuUnited States, uye vakagadzirisa maviri ezvirongwa zvekufambisa kuti vatumire kuUnited States.
Pasuru yekutanga: kutumira kunze nemhepo. Ichabhururuka yakananga kubva kuShenzhen ichienda kuUnited States, uye YiXing Global logistics chikuva ichave nebasa rekuronga kuendesa kunzvimbo yemutengi mushure mekupedza kubvumidzwa kweCustoms muUnited States. Kubatsira kwechirongwa ichi ndechekuti kumhanyisa kwekumhanya kunokurumidza, asi nguva dzekubata dzakawandisa, izvo zvinogona kukonzera kukuvara kune kwekunze kurongedza kwekhibhodi
Sangano rechipiri: kutakurwa kwegungwa kwekutumira kunze kwenyika Peggy kubva kuYXL wepasi rose Logistics chikuva chakatsanangurira kuna Ms Lin muzvidimbu zvinodiwa uye nhanho dzakateedzana yenzvimbo dzekufambisa dzekutakura, senzvimbo yekubhuka, kurongedza, kuchenesa tsika, kubvumidzwa kwetsika kunzvimbo yekuenda chiteshi uye kuendesa . Mme Lin vakagutsikana kwazvo uye pakupedzisira vakasarudza kusarudza iyo American yakasarudzika mutsetse wekufambisa kwegungwa. Kubatsira kwechirongwa ichi kuchengetedzeka uye kuvimbika, kuchengetedza mutengo uye kushoma kwekubata nguva. Izvo zvinokanganisa ndezvekuti nguva yekufambisa yakareba kupfuura kutakura kwemhepo.
Nezve Ms. Linin keyboard yekuburitsa zvinhu, iyo Shenzhen yemunharaunda yekubhuka yekuzivisa basa inoitwa nePorsche Express yepasi rose logistics chikuva vashandi dockyard uye kurongeka, mushure meMuzvaLin mhinduro yakafadzwa nebasa racho rinogona zvakare kuratidza yepasi rose chikuva, nyanzvi kurongedza uye kugadzirira kwakabatana magwaro kuve nechokwadi chekutumirwa kwakatsiga, kuzivisa tsika, kutakura kune dzimwe nyika.
Inogona zvakare kutaura pasi rose zvigadzirwa zvehurongwa hwekunze mumiriri kwaMai Lin muprophase yezvinhu zvekutengesa kunze zvakagadzirira zvakakwana, saka kune imwe nyika nyika haisi nekuda kwekushaikwa kwemagwaro kana kubvumidzwa kwezvinhu zvacho hazvienderane nezvinetso zvakaita sechipingamupinyi, zvinosangana zvizere nezvinodiwa pakuburitsa keyboard, kutakura uye kubvumidzwa kwetsika uye kubvumidzwa kwetsika mushure mekupedzwa kwekutanga kunyatso kuendesa kwenzvimbo iyo mutengi Ms. Lin.
Vatengi vekunze vaMnu Lin vanogutsikana zvikuru nekubatana kwekutanga uku uye nekuuya kwezvinhu, saka vagadzira hukama hwekudyidzana kwenguva refu naAmai Lin vanoratidza kuonga kwavo kuYXL yepasi rese yezvigadzirwa zveichi.